'नेपालमै विदेशीस्तरको शिक्षा दिने योजना छ' | RevoScience Nepali
Home /‘नेपालमै विदेशीस्तरको शिक्षा दिने योजना छ’
slide imagesJuly 1, 2017
‘नेपालमै विदेशीस्तरको शिक्षा दिने योजना छ’
प्रविणराज जोशी, निर्देशक, वृहस्पति विद्यासदन, नक्साल, काठमाडौं
प्रविणराज जोशी नक्सालस्थित वृहस्पति विद्या सदनमा निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । सन् १९८३ मा उनको पिता पुरुषोतमराज जोशीले वृहस्पति विद्यासदन सुरुमा मैतीदेवीमा स्थापना गरेका थिए । शिक्षित परिवारमा हुर्किएका जोशी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ एन्ड कम्युनिकेसनमा स्नातक गरेपछि थप अध्ययनका लागि अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ अलावा गएका थिए । त्यहाँ उनले कम्प्युटर साइन्समा मास्टर्स गरे । अमेरिकामा बस्दा उनले नेसनल साइन्स फाउन्डेसनमा पनि काम गरे । उनी भन्छन्, ‘शैक्षिक वातावरणमा जन्मे–हुर्केकाले मलाई शिक्षण पेसा मन पथ्र्यो । त्यही भएर म अमेरिकाबाट वृहस्पति विद्यासदनमा काम गर्न फर्किएको हुँ ।’ उनले वृहस्पतिमा काम गरेको करिब ११ वर्ष बितिसकेको छ । वृहस्पतिका विद्यार्थीलाई विश्वका अन्य विद्यार्थीसरह बनाउन उनी लागि पर्दै आएका छन् । शैक्षिक योजना तथा आगामी कार्ययोजनाबारे रिभोसाइन्स मासिकले निर्देशक जोशीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अमेरिका पुगेको मान्छे कसरी वृहस्पतिमा जोडिन पुग्नुभयो ?
पहिलेदेखि नै मेरो शैक्षिक क्षेत्रमा रुचि थियो । सम्पूर्ण परिवारले अध्यापन पेशा अँगालेका थिए । भित्रदेखि नै पढाउने इच्छा थियो । यहाँ आइसकेपछि किताबी ज्ञानबाहेक प्राविधिक क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पलायो । त्यसका लागि केही खोज गरेँ । उदाहरणका लागि पब्लिक स्पिकिङ तथा साइन्सको प्रयोगात्मक शिक्षा सुरु भयो । विद्यार्थीलाई रमाइलो लाग्ने अनि सजिलो पनि हुने रेडियो, इलेक्ट्रोनिक तथा कम्प्युटरको प्रयोगात्मक शिक्षा सुरु गरियो । त्यसपछि बाँकी समय स्कुल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर त्यसमा केन्द्रित रहेको छु ।
सुरुमा वृहस्पति कुन उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको थियो ?
मैतिदेवीनजिक सानो संरचनाबाट वृहस्पति सुरु गरिएको हो । तत्कालिन अवस्थामा नेपालको पढाइ त्यति स्तरीय भएन भनी यहाँका विद्यार्थी दार्जिलिङ लैजाने चलन थियो । मेरो बुबाले पनि मलाई उतै लगेर पढाउनुभयो । यही चिज काठमाडौंमै गर्न सकिन्छ भनेर मेरो बुबाले स्कुल खोल्नुभएको हो । उहाँले पहिलो कुरा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुभयो ।
तपाईहरूसामु मुख्य रूपमा कस्ता चुनौती छन् ?
स्थापनाकालमा स्थानीय रूपमा स्कुल राम्रो भए हुन्छ भन्ने थियो । तर, अहिलेको परिप्रेक्षमा विश्वका अन्य मुलुकका विद्यार्थीसरह कसरी यहाँका विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउने भन्ने चुनौती छ । आजभोलि विद्यार्थीहरू विदेश जाने चलन व्याप्त छ । त्यसका लागि यहाँ विदेशीस्तरकै पढाइ आवश्यक हुन्छ । संसारभर चलेको गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमा लागू गर्ने भन्ने चुनौती छ ।
यसलाई अझै प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
खासगरी गुणस्तरीय जनशक्ति भेटिदैन । कतिपय शैक्षिक सामान पनि सर्वसुलभ रूपमा यहाँ पाइँदैन । अहिले संसारभरि ‘रासवरी पाइ’ बाट शिक्षा दिने चलन बढेको छ । त्यो यहाँ ल्याउन चुनौती छ । ‘स्ट्याम एडुकेसन’ को माध्यमबाट नयाँ–नयाँ सामानबारे सिकाउन सकिन्छ । इनोभेसन, थ्रिडी प्रिन्टिङबारे सिकाउन सकिन्छ । हामीलाई त्यो प्रिन्टर किन्न गाह्रो हुन्छ ।
नयाँ किसिमले सञ्चालन गरौं भन्ने लागे पनि एसइइमा राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । साइन्स इन्जिनियरिङमा फोकस गर्नुपर्ने हो, तर, हाम्रा अभिभावक शैक्षिक कुरामा केन्द्रित देखिन्छन् । त्यसकारण विश्व र स्थानीय स्तरको ‘सिनारियो’ मिलाउन चुनौती छन् ।
विद्यार्थीको प्रगति कस्तो छ ?
–धेरै विद्यार्थीसँग नियमित अन्तक्र्रिया हुँदैन । हाम्रा केही विद्यार्थी टेलिभिजनमा काम गर्छन् । त्यहाँ देख्दा खुसी लाग्छ । अस्पताल जाँदाखेरि विद्यार्थी भेटिन्छन्, खुसी लाग्छ । व्यापारिक क्षेत्रमा पनि लागेका छन् । उनीहरुले अन्य क्षेत्रमा पनि राम्रो गरेका छन् ।
शैक्षिक पाठ्यक्रमबाहेक थप कक्षा के–के छन् ?
हामीले थप कक्षाको लागि कोसिस गरिराखेका छौं । समस्या के हो भने तलदेखि नै घोकन्ते विद्यामा केन्द्रित भएकाले उनीहरू अलिकति हिच्किचाउँछन् । यसले उनीहरूमा डर विकास गरेको पाएको छु । स्रोतसाधनको व्यवस्था भए पनि उनीहरूले सिर्जनात्मक कार्य गर्न नसकेको जस्तो लागेको छ । यसलाई सुधार्न विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा पनि कमी भएको मैले अनुभव गरेको छु ।
स्कुलका लागि शिक्षक छनोट गर्दा कस्तो मापदण्ड तय गर्नुभएको छ ?
हामीले सकेसम्म अनुभवी शिक्षक राख्ने हाे। सकेसम्म विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउनसक्ने शिक्षक छानेका छौं । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको अवस्थामा उनीहरूलाई तालिम दिने गरेका छौं । शैक्षिक सत्र सुरु हुनभन्दा अगाडि ‘ट्रेनिङ’ व्यवस्था गर्दै आएका छौं । वार्षिक योजना पनि दिने गरेका छौं । शिक्षकलाई गोल सेटिङ अर्थात् लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रेरित गरेका छौं ।
प्रयोगात्मक शिक्षालाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
पाठ्यक्रम नियमित पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कक्षा ९ र १० पछि एकैचोटि कक्षा ११ मा विज्ञान शिक्षा अध्ययन गर्न कठिनाइ पर्नसक्छ । उनीहरुलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ध्यान केन्द्रित मुस्किल पर्नसक्छ । विद्यार्थीका लागि एउटा नयाँ कक्षा थप्नेबित्तिकै आतिनसक्छन् । तर, त्यसो होइन, उनीहरुलाई प्रयोगात्मक शिक्षाप्रति लगनशील हुन प्रेरित गर्नुपर्छ ।
वृहस्पतिमा विद्यार्थी संख्या कस्तो छ ?
माध्यमिक तहमा २ सय ४० जना विद्यार्थी छन् । विज्ञान संकायमा मात्र लगभग १ सय जना छन् ।
प्रयोगात्मक शिक्षाको व्यवस्था कस्तो छ ?
सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला छन् । प्रत्येक विद्यार्थीले छुट्टाछुट्टै बसेर आफ्नो प्रयोगात्मक कार्य गर्नसक्छन् ।
अन्य शैक्षिक संस्थाको दाँजोमा वृहस्पतिको शुल्क कस्तो छ ?
अन्य प्राइभेट कलेजको दाँजोमा हाम्रो शुल्क मध्यम खालको छ ।
वर्षभरिमा कक्षा ११ र १२ मा कति खर्च हुन्छ ?
कक्षा ११ र १२ मा गरी १ लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ ।
यो शुल्कले धान्न पुगेको छ ?
–अलि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो हिसाब चाहिँ के हो भने कुनै दिन ११ र १२ को पाठ्यक्रम सुधार भएर आएमा धान्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीले यही खाना खुवाउने भन्छौ । शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा एउटा दर निर्धारण गरेका हुन्छौं । पछि मार्केट भाउ एक्कासि बढेर आउँछ । यसले समस्या पार्ने हुन्छ । प्रयोगात्मक कक्षाको सामग्री पनि त्यसरी बढ्छ, त्यतिखेर धान्न गाह्रो हुन्छ । शैक्षिक सत्रको बीचमा शुल्क बढाउने अवस्था हुँदैन ।
अतिरिक्त कक्षा कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
–बेला बेलामा विज्ञहरू बोलाउने गरेका छौं । हामी आफैंले पनि कक्षा दिने गरेका छौं । समयमै पाठ्यक्रम सिध्याउनुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो भएको छ । वर्षभरिमा १२ जना विज्ञ ल्याउने, १२ वटा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छौं । नैतिक शिक्षा, मौखिक प्रस्तुति, विज्ञान प्रयोगात्मक शिक्षालाई जोड दिएका छौं ।
विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत कस्तो छ?
–८५ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
शतप्रतिशत नतिजा ल्याउन केले बाधा पु¥याएको छ ?
भौतिकशास्त्रमा समस्या छ । विद्यार्थीलाई बढी गाह्रो लाग्दोरहेछ । पाठ्यक्रम हेर्दा कक्षा १० बाट ११ को ग्याप अजङको छ । असार–साउनमा कक्षा सञ्चालन हुन्छ । छोटो समयमै कोर्स सिध्याउनुपर्ने बाध्यता छ । कक्षा १० बाट सिधै कक्षा ११ मा सञ्चालन हुने हो भने २–३ महिना बढी समय पाउन सकिन्छ । त्यसले केही राहत मिल्ने देखिन्छ ।
उपत्यकाबाहिरका विद्यार्थी कतिजति छन् ?
उपत्यका भित्र र बाहिर गरी दुवै ठाउँका विद्यार्थी छन् । यो संख्या आधा–आधाजस्तै होला । मेरो विचारमा सानैदेखि यही पढेको विद्यार्थी भएमा राम्रो हुन्छ । अन्यत्रबाट ठूलो कक्षामा आएको विद्यार्थीको बानीव्यवहोरा चिन्न केही समय लाग्छ । सुझाव–सल्लाह दिनेबेला ऊ हिँडिसक्छ ।
उत्कृष्टताको हिसाबले उपत्यका बाहिर वा भित्रमध्ये कहाँको विद्यार्थी राम्रो हुन्छ ?
–खासै फरक देखिँदैन । उपत्यका बाहिरबाट आउने विद्यार्थीमा अंग्रेजी भाषाको केही समस्या हुन्छ । उनीहरूका लागि अंग्रेजी कक्षामा जोड दिन्छौं ।
‘करिअर काउन्सिलिङ’ गर्नुहुन्छ ?
काउन्सिलिङ गर्ने गरेका छौं । हरेक विद्यार्थीपिच्छे काउन्सिलिङ गर्न चाहिँ समय लाग्ने हुन्छ । उसको रुचि र आकांक्षा बुझ्न समय लाग्ने हुन्छ । समूहगत रूपमा काउन्सिलिङ गर्न त्यति समस्या पर्दैन ।
अन्त्यमा, विद्यार्थीले वृहस्पति विद्यासदनमै किन पढ्ने ?
यसमा २–३ वटा पक्ष स्पष्ट छन् । सबैतिर विज्ञान लगभग उस्तै तरिकाबाट पढाउने गरेको पाइन्छ । सरकारले निर्दिष्ट गरेको पाठ्यक्रम पनि उही छ । अव वृहस्पति नै किन पढ्ने भन्ने सवालमा यहाँ प्रत्येक विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै पढ्ने वा प्रयोगात्मक गर्ने वातावरण तयार गरेका छौं ।
उसले के गर्न खोजेको छ भनी बुझ्न र उसलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यहाँको प्रणाली अन्यत्रभन्दा फरक छ । विद्यार्थीलाई परिवारको सदस्यको रूपमा लिने गरिन्छ । समय–समयमा ‘इनोभेसन’को ट्रेनिङ दिने गरेका छौं । त्यसबाहेक विद्यार्थीको समग्र व्यक्तित्व विकासका लागि हामीले काम गरेका छौं ।
गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन गरिरहेका छौ